Taxliil ku saabsan awooda Boxoffice-ka Sidharth Malhotra iyo sida ay dhulka usii galeyso | Filimside.net
Home » Box Office » Taxliil ku saabsan awooda Boxoffice-ka Sidharth Malhotra iyo sida ay dhulka usii galeyso
Taxliil ku saabsan awooda Boxoffice-ka Sidharth Malhotra iyo sida ay dhulka usii galeyso
Sanadii 2012 Karan Johar wuxuu soo caan bixiyay sedex dhalin yar Varun Dhawan, Sidharth Malhotra iyo Alia Bhatt asigoo u dhiibay filimkii Student Of The Year.
Student Of The Year wuxuu u gadmay sida filim ay hogaamiyaal ka yihiin jilaayaal mudo fanka kusoo jireen sidoo kalena aqoonsi weyn ayuu siiyay dhalintii filimkan lagu soo caan bixiyay.
Hadaba 5-sano kadib Varun iyo Alia dhalinta fanka Hindiya ayay hogaanka u qabteen Varun wuxuu ku biiray liiska 9-ka atoore ee Boxoffice India u aqoonsatay inay xiligaan filim dadka ka gadi karaan, halka Alia ay haatan ka mid tahay sedexda atirisho ee Boxoffice-ka ugu awooda badan.
Laakiin Siddharth Malhotra baska wuu ka dhacay, qof kalena ma eedi karo waa inuu isaga is eedaa madaama 8-% maanta heerka uu taagan uu isaga is dhigay si gaar ah doorashada aflaantiisa ayaa siweyn u qaldan!
Sidharth Malhotra iyo Filimadiisa Natiijo Ahaan Waxay Noqdeen:
A Gentleman waa filimkii ugu dambeeyay ee Sidharth Malhotra sameeyay laakiin nasiib daro wuxuu noqday filimkiisa ugu darajada hooseeyo madaama uu bur buray ama uu noqday Big Disaster.
Fadlan hoos kaga bogo 7-filim ee Sidharth Malhotra sameeyay mid walbo, natiijada uu gaaray iyo lacagaha uu keenay:
1. Student Of The Year (2012) – Semi Hit wuxuu keenay 62.94 Crore
2. Hasee Toh Phasee (2014) – Average wuxuu keenay 36.56 Crore
3. Ek Villain (2014) – Super Hit wuxuu keenay 97.51 Crore
4. Brothers (2015) – Flop wuxuu keenay 70.65 Crore
5. Kapoor & Sons (2016) – Hit wuxuu keenay 69.37 Crore
6. Baar Baar Dekho (2016) – Flop wuxuu keenay 30.62 Crore
7. A Gentleman (2017) – Disaster wuxuu keeni doonaa 20 Crore ilaa 22 Crore inta u dhaxeyso!
Sidharth Mahotra filimada u guuleesteen: 4-filim ayaa u guuleesatay taasi oo ka dhigan in 57.14% filimadiisa guuleesteen.
Sidharth Malhotra filimada Hit dhameestiran u noqdeen: 2-filim ayaa Hit dhameestiran u noqdeen in 28.57% filimadiisa Hit noqdeen.
Sidharth Malhotra filimada ka guul dareesteen: 3-filim ayaa ka guul dareesteen taasi oo ka dhigan in 42.85% filimadiisa guul dareesteen.
Sidharth Malhotra Cadaadiska Saaran Iyo Dooqyadiisa Oo Aad U Xun:
Xidgaan dhalinta yar sanadii 2014 markii uu Ek Villain sameeyay sidoo kalena uu Super Hit weyn noqday magaciisa Hindiya oo dhan ayuu ku faafay sidoo kalena min tuulo ilaa magaalo ayuu aqoonsi ka helay.
Balse kadib aflaanta uu doortay waxay ahaayeen kuwo sheeko ahaan liitaan sida Brothers oo filim weyn ahaa laakiin masuuliyada guul darada isaga ma qaadan ee Akshay Kumar ayaa qaatay madaama Akki awood ahaan uu ka sareeyo Siddharth.
Kapoor & Sons filim Hit ah ayuu noqday laakiin wuxuu ahaa filim 6 ilaa 7-magaalo ka gadmay miisaaniyadiisana ay xadidneyd.
Balse Baar Baar Dekho iyo A Gentleman gabi ahaanba awooda Sidharth ayay shiiqeen madaama wiilkii sameenayay filimada 60 Crore ilaa 90 Crore soo xareenayo halmar uu hoos ugu dhacay inuu noqdo atoore 30 Crore iyo 20 Crore sameyn karo.
Taasi waxay ka dhigan tahay in 70% ilaa 80% xidigaan awoodiisa Boxoffice hoos u dhacday isagana ayaana sabab u ah oo doortay Baar Baar Dekho iyo A Gentleman oo noqdeen kuwo siweyn awoodiisa u fashiliyeen xiligaan la joogo.
Sidharth Malhotra Maxaa U Diyaarsan Aflaan Ah: Xidigaan waxaa u diyaarsan filimka Ittefaaq oo la daawan doono 3 November 2017.
Filimkaan waxaa la jilayaan Sonakshi Sinha iyo Akshaye Khanna marka masuuliyada isaga ayay saaran tahay madaama labada kale awood fanka xiligaan ku laheyn.
Balse dhibka ugu weyn waxay tahay Ittefaaq inuusan wax hees ah laheyn sidoo kalena waa filim qayaano iyo cabsi isku jirto ah inta badana aflaanta noocaas ah Boxoffice-ka saameyn kuma yeeshaan.
Sanadka dambe horaantiisa wuxuu la imaan doonaa filimka Aiyaary waxaana la daawan doonaa 25 Janaayo 2018 waxaana la jilaayo Monaj Bajpayee, filimkaan waxaa Director ka ah Neeraj Pandey sidaa darteed midkaan wuxuu noqon karaa mid Siddharth dib usoo celin karo hadii sheekadiisa ay heer sare noqoto.
Shabakada Filimside Waxay Leedahay Soo Kabasho Wanaagsan Siddharth Malhotra…………..
2 Responses to Taxliil ku saabsan awooda Boxoffice-ka Sidharth Malhotra iyo sida ay dhulka usii galeyso
sxp qoraaladan waa kuwii hore maxaad ugu soo celisay dhamaantoood
Walaalkeen Web-ka ayaan dib ugu soo celineynaa xogaha keedka ee muhiimka ah waa intaas madaama hawl balaaran laga sameeyay.
Marka kuwii hore hadii aad aragtid dib ha u arkin, kuwa cusubna aqriso waan soo daabaceynaa.